Echiche Ụgha nke Odin: Nchịkọta dị mkpirikpi - UniProyecta
Odin Ọ bụ chi Asgard kachasị ike ma bụrụkwa isi nke Aesir, na akụkọ ifo Norse. Mgbe ụfọdụ a na -akpọ Odin onye nwere ike ime ihe niile ma ọ bụ onye na -awagharị awagharị, n'ezie, ọ nwere ọtụtụ aha, n'ihi na o meela ọtụtụ ụdị n'oge dị iche iche. Odin dị ka onye mgbaasị na ọ nwere ike bụrụ ihe mkpali nye Gandalf maka akwụkwọ JRR Tolkien nke Onyenwe nke Mgbaaka na akwụkwọ Hobbit.
Ejikọtara Odin na ọgwụgwọ, ọnwụ, eze, amamihe, agha, ịta amoosu, uri, na mkpụrụedemede runic, a kwenyere na ọ bụ "onye ndu mkpụrụ obi." Okwu ọgbara ọhụrụ "Wednesday" ka akpọrọ aha Odin ma sitere n'okwu German Wotan nke pụtara "Odin", yabụ Wenezde bụ "ụbọchị Odin." Odin bi n'ụlọ a na -akpọ Valaskialf, n'ime ụlọ a, Odin nwere ụlọ elu toro ogologo na n'elu ụlọ elu ahụ nwere ocheeze akpọrọ Hlidskialf, site ebe a Odin nwere ike ịhụ ụwa niile itoolu. Odin bụ nwa nwa Buri Æsir mbụ, bụrụkwa nwa nke ọkara Chukwu, ọkara Giant Bestla na Bor.
Odin nwere ụmụnne nwoke abụọ, Vili na Ve, ya na ụmụnne ya Odin kere ụwa na akụkọ ifo Norse. Odin lụrụ nwanyị mara mma Frigg, ha nwere ụmụ Baldr na Hod, mana Odin nwekwara ụmụ ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị Refeyim bi na Jotunheim (ala ndị Refeyim), ọ mara mma nke na ọbụna Odin enweghị ike iguzogide ya. Yabụ na Odin agaala Jotunheim ọtụtụ oge ka ya na otu ọmarịcha ndị dike ahụ nọrọ.
Nke a emeela ka Odin bụrụ nna Thor (Chineke nke égbè eluigwe) na nnukwu Jörð nke pụtara ụwa, ị nwekwara ike mara ya n'okpuru aha Fjörgyn. Odin na nnukwu Grid nwekwara nwa nwoke aha ya bụ Vidar. Odin na nnukwu Rind nwekwara nwa nwoke aha ya bụ Vali.
Odin nwere ike ịkpụgharị dịka Loki, ọ nwere ike ịbugharị n'ime anụmanụ ma ọ bụ mmadụ n'oge ọ bụla ọ chọrọ. Odin na -ekwukarị nkebi ahịrịokwu na ilu, na olu Odin dị nro nke na onye ọ bụla nụrụ ya na -eche na ihe niile ọ na -ekwu bụ eziokwu.
Odin nwekwara ike ikwu otu okwu na ọ ga -afụ ọkụ nke ọkụ, ma ọ bụ mebie ebili mmiri nke oke osimiri. Odin adịchaghị arụ ọrụ n'agha, mana mgbe ọ nọ, ọ nwere ike ime ka ndị iro ya kpuo ìsì n'ọgụ, ntị chiri ma ọ bụ ụjọ, Odin nwere ike mee ngwa ọgụ ya ka ọ bụrụ osisi, ma ọ bụ mee ka ndị nwoke ya dị ike dị ka osisi. .
Odin nwere ike ibu amụma ọdịda nke mmadụ niile, wee hụ ihe gara aga ya, ọ maara na otu ụbọchị Ragnarok (Ragnarök) ga -amalite na onweghị ihe ọ ga -eme iji gbochie ya. Odin nwekwara ikike ịga mba ndị dịpụrụ adịpụ, na ebe nchekwa ya ma ọ bụ nke ndị ọzọ. Odin nwere ike iziga ndị mmadụ n'ọnwụ ha ma ọ bụ nye ha ọrịa. Ụfọdụ Vikings chụrụ onwe ha n'àjà nye Odin, ma nye ya ezigbo nkwa, na -enwe olileanya ịmara ma ha ga -emeri n'ọgụ ma ọ bụ na ha agaghị emeri.
Sleipnir bụ ịnyịnya isi awọ nwere ụkwụ asatọ, ịnyịnya a bụ ịnyịnya anwansi, na nke kachasị mma n'ịnyịnya niile. Sleipnir bụ akara nke ikuku ma nwee akara ọkụ mmụọ na ya. Sleipnir nwere ike na -awụli elu na ikuku dị ka ọ na -eme n'ala. A mụrụ Sleipnir na Loki mgbe ọ gbanwere ịghọ nne ma jiri nnukwu ụlọ na -ewu ụlọ wee tụrụ ime (nnukwu onye na -ewu ụlọ bụ onye wuru mgbidi gburugburu Asgard, ụlọ chi). E mechara nye Sleipnir Odin dị ka onyinye Loki.
Categories Akụkọ ifo Norse Igodo bọtịnụ
Inicio » omenala » Akụkọ ifo Norse » Echiche Ụgha nke Odin